खु’सिको खबर:नेपाली युवाले र’केट प”रिक्षण गरे, यसरी उड्यो रकेट भिडियोमा हेर्नुस। – Gorkhali Dainik
काठमाडौं ।इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली युवा इ’न्जिनि यरिङका विद्यार्थीहरुको समूहले बनाएको रकेट परीक्षण भएको छ ।गत शनिबार नेपालको पहिलो रकेट गरु”डको सिन्धुलीको भिमानमा प्रक्षेपण परीक्षण गरिएको हो ।रकेट र स्याटेलाइट प्रविधिमा नेपा’ल पनि प’छि छैन भन्ने सन्देश दिनका लागि नेपाली युवाहरुको समूहले र’केट प्रक्षे’पण परी’क्षण गरेको हो ।
जसमा नेपाली सेनाले साथ दिएको थियो ।प्रक्षेपण परी क्षण समारोहमा प्रधान से’नापति पू’र्णचन्द्र थापा उपस्थित भए’का थिए ।रकेट करिब डेढ सय मिटर आ’काशमा उडे को थियो । त्यसपछि हावाका कारण रकेट दुर्घटना हुन पुगे को थियो । यो रकेट १० हजार फिट एलजी एलको उचाइ मा पु’ग्ने अनुमान गरिएको थियो।
हाल देखिएका विभिन्न समस्या मध्य’नजर गर्दै इन्जिनिय रिङ का विद्यार्थी हरुको यो स”मूहले आगामी महिना पुनः रकेट प्रक्षेपण गर्ने जनाए को छ ।स्पेसपोर्ट अमेरि’कामा आ’योजना हुने रकेट इन्जिनियरिङ प्रतिस्पर्धा ‘स्पेसपोर्ट अमेरिका कप २०२१’ मा नेपाली रकेट ‘गरुड’ पनि छनौ टमा परेको छ ।-इन्जिनियर्स पोष्ट,
यो पनि काठमाडौं । लामो समय सम्म कुलमान घिसिङको पुन नियुक्तिको लागि आवाज बुलन्द भयो सडक सञ्जाल तात्यो अन्तत: सरकारले सोझै शाक्यलाई विद्युतप्राधि करणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति गर्यो। अहिले प्रश्न यहि हो नेपाल विद्यु,त प्राधिकरणले कुलमान घिसिङ हुदा घाटामा गएको विद्युतप्राधिकरण एक वर्षमै १४९ प्रतिशत नाफा वृद्धि मा गएको थियो ”
“जब कुलमान आउनु अगाडी १८ घण्टा लोडस्रेडिङ बेहोरे का जनताले कुलमान आए पछि छुटकार पाए। लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत प्रसारण र वितरणलाइनको सुदृढीकरण मा केन्दि्रत भएको विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमै ७ अर्ब २० करोड नाफा ,आर्जन गरेको थियो र सिङ्गो देश लोड सेडिङ मुक्त भएको थियोे”।
“२०७३ भदौमा कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा रुपमा प्राधिरकणमा प्रवेश गरेका थिए । उनी आउँदा प्राधिकरण वार्षिक ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा थियो ।तर घिसिङ नेतृत्वमा, आएको ११ महिनामा नै घाटा हटाउँदै १ अर्ब ४६७ करोड नाफा पनि आ’र्जन गर्न प्राधिकरण सफल भयो ।”
“३४ वर्ष अघिसम्म प्राधिकरण, निरन्तर घाटमा थियो । आव ०६६ ६७ मा प्राधिकरणले ६ अर्ब ९६ करोड घाटा बेहोरहेको थियो । एका एक कुलमान को इन्ट्री भए पछि प्रधिक,रण नि नाफामा आयो सारा नेपाली लाई पनि उज्यालो दिए ।”कुलमान घिसिङ को कार्यकारी निर्देशन समयावधि सकियो अनि सरकार ले कुलमान लाई पुनः नियुक्ति दिएन।
अहिले देश मा दिनहु थोरै थोरै लोडसेडिङ बढदै छ । फेरि सबैलेकुलमान लाइ सम्झिनु बाहेक अरु केही विकल्प छैन ।यहि विषय लाई लिदै बरिस्ठ क्याप्टेन बिजय लामा लेख्नु हुन्छ “फेरि लोड शेड्डिङ सुरु हुन,थालिसक्यो”। बिस्तारै समय अवधी बडाउदै जाँदै छ! कारण देखाउदा सुख्खा याम भएकोले पानीको सतह घटेर भन्ने गर्छ्न बिद्धुत प्राधिकरणको हाकिम साबले!!!”
“के कुलमान घिसिङको पालामा ,चाहिँ सुख्खा याम लागेन अनि पानी टन टना टन हुन्थ्यो हो? प्रकृति अनि भाग्यले मात्र साथ दिएको हो त कुलमानलाइ???” केही समय पछि फेरि इन्वर्टर (invertor) अनि जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाएर आउदैनन अनि जनतालाइ पुरानै ठाउमा पुराउदैन भन्न सकिन्न!!! यहि चा,लाले पुर्याउनु समय लाग्दैन।”
“जनता भनेको के हो बुझ्नै गाह्रो भैसक्यो कारण जे पनि चुप लागेर सहने??हुन त के नै गर्न या बोल्न सकिन्छ, जुन देशमा शिर्श नेताहरुलाई झगडा गर्नमा नै फुर्सद छैन!! झै झगडा गर्न रोकेर देश बिकाशका काम कुरा पो गर्ने कि??”
लामाको लेख जस्ताको तस्तै फेरि लोड शेड्डिङ सुरु हुन थालिसक्यो। बिस्तारै समय अवधी बडाउदै जाँदै छ! कारण देखाउदा सुख्खा याम भएकोले पानीको सतह घटेर भन्ने गर्छ्न बिद्धुत प्राधिकरणको हाकिम साबले!!!
के कुलमान घिसिङको पालामा चाहिँ सुख्खा याम लागेन अनि पानी टन टना टन हुन्थ्यो हो? प्रकृति अनि भाग्यले मात्र साथ दिएको हो त कुलमानलाइ??केही समय पछि फेरि इन्वर्टर (inverter) अनि जेनेरेटर माफियाहरु सल्बलाएर आउदैनन अनि जनतालाइ पुरानै ठाउमा पुराउदैन भन्न सकिन्न!!! यहि चालाले पुर्याउनु समय लाग्दैन।
जनता भनेको के हो बुझ्नै गाह्रो भैसक्यो कारण जे पनि चुप लागेर सहने???हुन त के नै गर्न या बोल्न सकिन्छ जुन देशमा शिर्श नेताहरुलाई झगडा गर्नमा नै फुर्सद छैन!! झै झगडा गर्न रोकेर देश बिकाशका काम कुरा पो गर्ने कि?? जय चन्द्र सुर्य!!!
Prevफेरी जंगलमा रु’दै गरेको बे’वारि’स शिशु यस्तो अवस्थामा भेटियो…(भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextअब नियम विपरित माछा मा र्न नपाइने, मनपरी गरे कारवाही हुने
मन थामेर पढ्नुहोला १९ वर्षकी किशोरी मा थि के भयो